Naagahaha u dhashay Dalka India oo baadi goobaya Ragga ,Sabab qarsoon ayey ku doorteen. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Naagahaha u dhashay Dalka India oo baadi goobaya Ragga ,Sabab qarsoon ayey ku doorteen.
Naagahaha u dhashay Dalka India oo baadi goobaya Ragga ,Sabab qarsoon ayey ku doorteen.
Saturday, November 18, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Maanta oo Maalin Isniin ah ayaa Warbixin Cajiib ah waxaa lagu faafiyay Baraha Interedka ee ay Isticmaalaan dad ka Hindida ah ,waxaana Warbixintan Ujeedkeedu ahaa in Naagaha Hindida ah ay aad u jecel yihiin Ragga Somaalida ah,waxana la shegay in ay ku doorteen Arrimo muhiim ah.
Ragga Somalida ah ayaa waxaa la ogaaday in qaab dhismeedka uu ilaahey u sameeyay ay aad ugu duwan yihiin Ragga kale ee Caalamka,kunool waxaana khubarro u dhashay dalka Hindia ay ogaadeen in Unug yo badan oo dhinaca Ragnimada ah ay leeyihiin Ragga Somaalida ah.
Arrintan ayaa markii ay maqleen Gabdhaha Hindida ah durbadiiba waxa ay bilaabeen in ay Baadi goobayaan Ragga Somalida ah ,waxaana markii ay xiriiro is barasha ah ay la sameeyeen Wiilasha Somaalida ah ee ku nool dalkaas Hindia.
Hadiiba adigoo Somalia ah hadii aad aragto Magac dumarow oo Hindi ah oo kugu soo darsado Facbookaaga ,ama Twitter-kaaga ,waa Fursad waana in aad aqbashaa ,maxayeelay waa Nasiib ku soo raadsaday